Hebei Wenwen ကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
faux သားမွေးသည် PRODUCT, သားမွေးအရေခွံ ;
plush ထည်, faux သားမွေး, အတုသားမွေး, မွေးမွေး, jacquard plush, တိရစ္ဆာန်အတုယူသားမွေး, အစွန်အဖျား-ဥတုသားမွေး, အတုသားမွေး, သိုးသငယ်သားမွေး, မြင့်မားတဲ့ပုံ plush ထည်နှင့်လူကြိုက်များသောကစားစရာများအတွက်အသုံးပြုကြသည်သောအခြားဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များအားလုံးသည်အမျိုးမျိုး, အဝတျကို, ကော်လာအထည်, အဝတ်, အဝတ်, သားမွေးတန်းစီ, အင်္ကျီ, အထည်ချုပ်၏အတွင်းစိတ်, စောင်, ဆိုဖာ, ကော်ဇော, ဖိနပ်, ကူ, ခေါင်းအုံး, အလှဆင်ပစ္စည်းများ, bedclothes အိမ်ချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ။
အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်ပိတျထားသောရော်ဘာ / EPDM / PVC ;
, ရော်ဘာတံဆိပ်ခတ် strips တွေ, တံခါးကိုနှင့် strips တွေပိတျထားသောပြတင်းပေါက်ရော်ဘာအဖြစ် uch ထုတ်ကုန်များဆက်တိုက်ထုတ်လုပ် EPDM, PVE, TPE, CR, ရော်ဘာ, NBR, TPR, silica နှင့်အခြားသောအသုံးပြု, strips တွေပိတျထားသော foamed, ရေမြှုပ်ရော်ဘာတံဆိပ်ခတ် strips တွေ, အလှဆင်ရော်ဘာထုတ်ကုန်။ မော်တော်ယာဉ်, သင်္ဘော, တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်များ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, ရေချိုးခန်း, ပိုက်လိုင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
COLOR သံမဏိပန်းကန် ;
အဓိကအားဖြင့်အသေးစားစက်ရုံများ, စူပါမားကက်, မီးရထားဘူတာ, အားကစားကွင်း, လေဆိပ်, စီးပွားဖြစ်အဆောက်အဦးများ, ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံများအလင်းတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသောအဓိကထုတ်ကုန် prepainted နေကြသည်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိနှင့်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိနှင့် galvalume သံမဏိနဲ့ anti-လက်ညှိုးကိုသံမဏိနဲ့မြှောင်းပုံသံမဏိစာရွက်, သံမဏိနှင့်သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး, မော်တော်ကားနှင့်အိမ်သူအိမ်သားကိုင်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်း။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ထွက်ပစ္စည်းများက ISO 9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် ISO 14001 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်အတူလိုက်နာနှင့်လည်းတရုတ်အမျိုးသားရေးစံနှုန်းနှင့်အ ASTM စံတွေ့ဆုံရန်။
1) 10 နှစ်ကျော်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များအပေါ်အတှေ့အကွုံတင်ပို့ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်!
အပြောင်းအလဲနဲ့မှပစ္စည်းရွေးချယ်ရာတွင်ထံမှ 2) အတိအကျအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား!
4) Related ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေး!
Ltd. , Hebei Wenwen ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအမြဲ "အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန် & ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း", "သင်တို့ဆီသို့လေးစားမှုဖေါ်ပြခြင်း & ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေ" ၏ဝန်ဆောင်မှုအယူအဆနှင့်ရိုးသားမှု "၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝိညာဉ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာအားဖြင့်တည်၏, ဖောက်သည်ကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးစိတ်အားထက်သန်မှု, အကယ်စင်စစ် "။